ကိုရီးယားစစ်ပွဲ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို အမေရိကန် ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများ မပါဘဲ မြောက?? - Yangon Media Group
ကိုရီးယားစစ်ပွဲ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို အမေရိကန် ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများ မပါဘဲ မြောက??
ဆိုးလ်၊ ဇွန် ၂၅
မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသည် ကိုရီးယားစစ်ပွဲစတင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ခါတိုင်းကဲ့သို့ အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများမပါဘဲ ဇွန် ၂၅ ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၂၅ ရက်တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုရီးယားစစ်ပွဲ၌ မြောက်ကိုရီးယားက စတင်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ သုံးရက်အကြာတွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဆိုးလ်ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် တောင်ကိုရီးယားဘက်မှ အမေရိကန်ဦး ဆောင်သောတပ်များ ကူညီတိုက်ခိုက်သဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားတပ်များ ပြန်ဆုတ်ပေးခဲ့ရသည်။
မြောက်ကိုရီးယားကမူ ကိုရီးယားစစ်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ အမေရိကန်၏ တစ်ကမ္ဘာလုံးလွှမ်းမိုးနိုင်ရေး အစီအစဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ပြန်လည်မ ပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းမှာလည်း အမေရိကန်ကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟု အစဉ်အဆက်စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။ ကိုရီးယားစစ်ပွဲ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားများတွင် အမေရိကန် ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများကို အစိုးရပိုင်ရုပ်သံများက ဝါဒ ဖြန့် ပြသခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယခုနှစ် ကိုရီးယားစစ်ပွဲ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်မူ အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများ မပါဝင်သည်ကို ထူးခြားစွာ တွေ့ရှိရသည်။ စင်ကာပူထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် အမေရိကန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားကြား ဆက်ဆံရေးအလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့်အတွက် မြောက်ကိုရီးယားက ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြုမူလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။
မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရသည် ပိုစတာများ၊ ဆိုင်းဘုတ်များတွင် မစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်များနှင့် စစ် ရေးလေ့ကျင့်မှုပုံများအစား စိုက်ပျိုး ရေးနှင့် စက်မှုကဏ္ဍပုံများ အစားထိုး သုံးစွဲလာသည်ကိုလည်း တွေ့ ရသည်။ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် စင်ကာပူထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်သည် အဏုမြူလက်နက်စွန့်လွှတ်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော် မြောက်ကိုရီးယားသည် လက်တွေ့တစ်စုံတစ်ရာ လုပ် မပြရသေးဟု ဝေဖန်သူများက ဆိုသည်။
ဗီယက်နမ်တွင် မိုးကြီး၍မြေပြို၊ ခုနစ်ဦးသေဆုံး
ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေနှင့်သွင်းကုန်ခွန်လျှော့ချပေးရန် အမေရိကန်က တရုတ်ကိုတောင်းဆို